အဆိုပါ Erzyan Moksha အဘိဓါန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရှု? ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ? မီတာ။ ခ။ အချို့သောနှိုင်းယှဉ် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဆိုပါ Erzyan Moksha အဘိဓါန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရှု? ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ? မီတာ။ ခ။ မဆိုနှိုင်းယှဉ်
ဗစ်တိုးရီးယား, ဒီမှာ, ဆင်းပြီးနှင့်စကားများအတွင်းကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အတူစားပွဲတစ်ခုရှိသည်: http://www.cigankin.ru/archives/581
အများအားဖြင့် Mordvinians ဥရောပပြိုင်ပွဲကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်ကြသည်။ စိတျအပိုငျး -Moksha အဘိဓါန်များထဲတွင် Mordovians အဆိုပါ Ural ပြိုင်ပွဲအတွင်းအတော်လေးခေါင်းနှစ်လုံး-ရှည်ရှည်နဲ့အတော်လေးမြင့်မားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ, suburalsky type ကိုပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း Mordovians -Erzya အဘိဓါန်ဘို့ mezokefaliya အတော်လေးကျဉ်းမြောင်းသောမျက်နှာဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသော Sursky အမျိုးအစား Atlanto-ဘောလ်တစ်လူမျိုး, သွင်ပြင်လက္ခဏာ, ဒါပေမယ့် uskandinavskogo အမျိုးအစားအဖြစ်ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့မ။ အချို့သောအုပ်စုများ Mordovians -Erzya အဘိဓါန်များနှင့် Moksha အဘိဓါန်အဘိဓါန် South Mordovians ရုရှား Volga ဒေသများအတွက်ပုံမှန်လည်း N.Pontic tiptsentralnoevropeyskoy လူမျိုး, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစား mezokefaliey, ကျဉ်းမြောင်းသောမျက်နှာ, အတော်လေးဘုံ 69 ထူ ထပ်. ဆံပင်ရေပန်းစား, ပျမ်းမျှတစ်အရှည်အားဖြင့်သို့မဟုတ်ပျှမ်းမျှခန္ဓာကိုယ်အထက်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့သော anthropological ဝိသေသလက္ခဏာများ Pyanoborskuyu ရှေးဟောင်းသုတေသနယဉ်ကျေးမှု 70 left သူတစ်လူဦးရေနှင့်အတူလူတွေဆောင်ကြဉ်း Mordvinian ။
; Moksha အဘိဓါန် Erzya အဘိဓါန်ထက်အမျိုးအစားများကြီးမြတ်သောအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်အောက်ပါအတိုင်းအဖြစ် XIX ရာစု Mordovians ဖော်ပြထား၏အဆုံးမှာ Smirnov ဘေးကဆံပင်ရွှေရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်-eyed, အဲဒီမှာအတွက် Erzya အဘိဓါန်, Moksha- အတွက်ရေပန်းစားနှင့်မှောင်မိုက်ဆံပင်တစ် swarthy အသားအရေနှင့်အတူနှင့်ပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သော features တွေနှင့်အတူဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးစလုံးကွဲပြားခြင်းအတူတူပင်အကြောင်းကို Mordovians ၏တိုးတက်မှု, ဒါပေမယ့် Erzyan အကြီးအကျယ်များအပြင် (အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေ) 71 နှင့်အတူကွဲပြားပုံရသည်။
နှစ်ခု Mordovia subethnoses တစ်ခုချင်းစီဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားရှိသည်: Moksha အဘိဓါန် Moksha အဘိဓါန်, Erzya အဘိဓါန် Erzyan, သူတို့နှစ်ဦးစလုံးဘာသာစကားများ Finno-Volga Ural မိသားစုများ၏အုပ်စုပိုင်နှင့်စာပေ၏ status ရှိသည်။ ကိုယ်ကသာကိုယ့် th အလယ်၌ဖြစ်သောတစ်ခုတည်း Mordvinian ပရိုတို၏တည်ရှိမှုကိုတစ်ကြိမ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ N. အီး။ ဒါဟာ Moksha အဘိဓါန်များနှင့် Erzya သို့ခွဲ။ ဘာသာဗေဒဟာ Erzya အဘိဓါန်ဘာသာစကားမှာရုရှားဘာသာစကားမှ၎င်း, တူရကီ Moksha အဘိဓါန် (အဓိကအားဖြင့်တာ, Chuvash-) 70 ထံမှချေးကြီးစိုးကြောင်းသတိပြုမိသည်။ Mordovians .Mordovskaya အဆိုပါ XVIII ရာစု၏ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်အဲဒီမှာတိကျမ်းစာ၌လာသည်နှင့်ယခု Cyrillic အက္ခရာ Mordovia အရေးအသားအသုံးပြုနေသည်ရုရှားနှင့်တိုက်ဆိုင်စည်ပင်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီသည့်တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများနှင့်စပ်မျိုးကွဲများကိုထိမ်းသိမ်းတဲ့အရေအတွက်, သို့ Mordovian ဘာသာစကားအုပ်စုခွဲနှစ်ဦးစလုံး။
Posted in, ဘာသာစကားဝေါဟာရအတတ်ပညာ
66 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,275 စက္ကန့်ကျော် Generate ။